बिचित्र संसार – Page 13 – shubhabihani
Home / बिचित्र संसार (page 13)
अन्धो प्रेमले चिनेन नाता : बहिनिको सिउदोमा दाजुले सिन्दुर हालेपछि …………
काठमाण्डौ ५ मंसिर । भारतको मध्यप्रदेशको छतरपुर जिल्लाको एक गाउँमा शनिबार बिहान एक प्रेम जोडी विष सेवन गरेर आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् । उनीहरु दुवैको गम्भीर अवस्थामा छतरपुरको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
कसरी भयो यस्तो ?
मूलचन्द कुशवाह (२१) र उनका मामाकी छोरी राजकुमारी (१९) बीच करिब २ वर्षदेखि प्रेम चलिरहेको थियो । मूलचन्द्र छतरपुरदेखि करिब १५ किलोमिटर टाढा मऊसहानियामा बस्थे । राजकुमारी त्यहाँभन्दा करिब ८० किलोमिटरको दुरीमा उत्तरप्रदेशको दूर चरखारी भन्ने स्थानमा बस्थिन् । शुक्रबार राजकुमारी मुलचन्द्रको घरमा आएकी थिइन् ।
उनीहरु शनिबार बिहानै घरबाट निस्किएर घुम्नका लागि भन्दै म्युजियमतर्फ गएका थिए । उनीहरु दुवै जनाले म्युजियमको पछि बसेर संगै जिउने मर्ने कसम खाए । मुलचन्द्रले राजकुमारीको माग अनुसार उनको सिउँदो भरे । दुवैजनाले आफ्ना हातमा एक अर्काको नाम लेखे । तर उनीहरु एक अर्काबीचको पारिवारिक सम्बन्ध र विवाहलाई लिएर चिन्तित थिए ।
दुवै जनाले भावनामा बगेर बिष खाए । सोही स्थानमा रहेका मानिसहरुले मुलचन्द्रको परिवारलाई जानकारी दिएपछि बेहोस अवस्थामा उद्धार गरी अस्पताल लगिएको थियो । उनीहरु दुवै जनाको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ । नेपाल शन्देसबाट
यो हो ११ करोडको भैँसी
एउटा भैँसीको मूल्य कति पर्ला ? ५० हजार देखि लाख, डेढलाख सम्म । तर यो दुनियामा ११ करोड मूल्य पर्ने भैँसी समेत छन् भन्दा अचम्मै नपर्ने कुरा भएन ।
भारतको हैदरावादमा हरेक वर्ष आयोजना हुने सरदार उत्सव मेला नामक भैँसी मेला यो पटक विशेष रह्यो । कारण, मेलामा यसपटक एउटा यस्तो भैँसी ल्याइयो जसको मूल्य सुन्दा डरै लाग्छ । मुर्रा जातको त्यो भैँसीको मूल्य ७ करोड भारु तोकिएको थियो ।
११ करोड नेपाली रुपियाँ भन्दा बढि मूल्यको त्यो बहुमूल्य भैँसी हरियाणाबाट ल्याइएको हो । स्मरण रहोस् हैदरावादका यादव समुदायले हरेक वर्ष दिपावलीका अवसरमा भैँसी उत्सव मनाउने गर्छन् । जसलाई दुन्नापोथुला पांडुगाको नामले पनि चिनिन्छ ।
यो उत्सवमा भाग लिनका लागि भारतका विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरुले आ आफ्ना भैँसी लिएर आउँदछन् । भैँसीलाई फूलमाला पहिराएर सिँगारिन्छ । साथै भैँसीको परेड पनि खेलाइन्छ ।
जब एयरपोर्टमा पोर्न फिल्म चल्न थाल्यो…
पोर्चुगलको लिस्वन एयरपोर्टमा हालै एउटा अनौठो तथा लज्जाजनक घटना भयो जसका कारण केही बेर …लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भयो र सबै मानिस स्तब्ध भए ।
लिस्वन एयरपोर्टमा रहेको ठूलो टेलिभिजन स्क्रिनमा अचानक पोर्न फिल्म चल्न लागेपछि त्यहाँ रहेका मानिसहरुका एकाएक पसिना छुट्न थाले । यद्यपि टिभी स्क्रिनमा केही मिनेटका लागि मात्र पोर्न फिल्म चलेको थियो, तर केही क्षणभित्रमै एयरपोर्टमा हल्लीखल्ली मच्चियो । बिहान ३ बजे यो घटना भएको हो ।
एयरपोर्टमा पोर्न फिल्म चलेपछिको त्यहाँको रोचक अवस्थालाई एक विमान यात्रीले आफ्नो क्यामरामा कैद गर्न भ्याए । उनले उक्त भिडियो यु ट्युबमा पोष्ट गरेपछि त्यसले थप तहल्का मच्चाएको छ ।
एयरपोर्टका प्रवक्ताले अनुसार टेलिभिजनमा कुनै पोर्न फिल्मX नचलाइएको भन्दै टेलिभिजनमा स्थानीय एक च्यानल खोल्दा त्यसमा सफ्ट पोर्न प्रशारण भैरहेको हुँदा सोही प्रशारण देखिन गएको बताएका छन् ।
पेट्रोल सभापति, ग्यास प्रमुख अतिथि डिजेल र मटि तेल अतिथि
कार्तिक १४, २०७२- शनिबार बनेपामा अचम्मको दृश्य देखियो । अतिथि आसन ग्रहण गराउन राखिएका कुर्सीमा पेट्रोललाई सभापतिको आसनग्रहण गराइयो । ग्यासको सिलिण्डर प्रमुख अतिथि बन्यो । मिनिरल वाटरको बोतलमा भरिएको डिजेल विशेष अतिथि र मट्टितेल अतिथिको रुपमा रहे । जारी इन्धन अभावको सांकेतिक विरोध र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न आयोजित देउसी भैलोको दृश्य हो । श्रीकृष्ण म्युजिक प्रालिको आयोजना भएको कार्यक्रममा लोकगायक मच्छेश्वर सापकोटा, गायक रामहरि न्यौपाने, श्रवण रिमाल र शर्मिला श्रेष्ठले देउसीको भाकामा इन्धन उपलब्ध गराउन नसकेकोमा सरकार, दल र तीनका नेतालाई व्यङ्ग्य मिश्रित भावमा अनुरोध गरे ।
ए भन मेरा भाइ हो….. भन्दैनौं
के कति खान्छौ…. खाँदैनौं
म मागी दिउँला.. चाँहिदैन
के चाहिन्छ भन… इन्धन देऊ
इन्धन अभावले जनजीवन प्रभावित हुँदा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको गायक न्यौपानेले जानकारी दिए । देउसी गाउँदै उनीहरुले सरकारसँग बाँच्न पाउने अधिकार, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, रासायनिक मल, बिउ मागेका थिए ।
दैनिक साढे दुई किलो खुर्सानी खान्छन् खुर्सानीका राजा
अचम्म लाग्दो घटना घट्ने देशमा चीन सबैभन्दा अगाडी छ । चीनकै हेनान प्रान्तस्थित साओली गाउँमा एउटा त्यस्ता मानिस बस्छन् जसले दैनिक ५ पाउन्ड खुर्सानी खान्छन् । लि योंगजी अहिले खुर्सानीको राजा भनेर चिनिन्छन् । उनले उठ्नासाथ खुर्सानीले दाँत माझ्छन् । त्यसपछि ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनरमा समेत खुर्सानी नै खान्छन् । उनले सञ्चामाध्यमलाई अन्तरवार्ता दिदैँ आफू स्पाईसी खानाको प्रेमी रहेको र खुर्सानी आफ्नो सदाबहार आहार रहेको बताएका छन् ।
उनी मासु वा अण्डा बीना खाना खान सक्छन्, तर खुर्सानी बिना कहिल्यै खाना खान सक्दैनन् । भन्छन्, धेरै मानिस बिहानै उठेर दाँत माझ्छन् । तर म आफ्नो सासलाई ताजा राख्न खुर्सानी खान्छु । मेरा लागि खुर्सानी बिनाका कुनै पनि खाना स्वदविहान हुन्छन् । उनले आफैँ विभिन्न आठथरीका खुर्सानी रोपेका छन् । दश वर्षअघि उनी खुर्सानीप्रति आशक्त भएका थिए । त्यतिबेलासम्म उनी धेरै खुर्सानी खादैँन थिए । उनको छोरा दुर्घटनामा परेपछि उनले अस्पतालमा १० हजार युआन बिल बुझाउनुपर्यो । त्यसपछि उनीसँग खाना खानका लागि पनि पैसा हुन छाड्यो । गरिबीका दिनमा उनी एकपटक सडकमा हिड्दैँ गर्दा वहोश भए । त्यसपछि उनले आफ्नो छोराको उपयुक्त स्याहार गर्नुअघि आफैँ स्वस्थ रहनुपर्ने आवश्यकता बोध गरे ।
उनले पैसा जोगाउन रेस्टुरेन्टमा गएर दुईवटा कचौरामा खुर्सानीको धुलो मात्रै मगाएका थिए । त्यसमा पानी मिसाएर खाँदा उनको पेट भरियो । तर उनको पेटमा केही गडबढी देखिएन । त्यसपछि उनले आम व्यक्तिको तुलनामा आफूले धेरै स्पाईसी खाना पचाउन सक्ने अनुभव गरे । स्वास्थमा खुर्सानीको प्रभाव राम्रो देखिएपछि उनी बिस्तारै यसतर्फ आर्कषित भए । अहिले उनी दैनिक ५ पाउन्ड खुर्सानी खान्छन् । दैनिक खाना खाने बेला बाहेक खाजा खाँदा तथा फुर्सदको समय काट्न पनि उनी खुर्सानी नै खान्छन् ।
एक पटक रेस्टुरेण्टमा खाना खान जाँदा उनले खुर्सानीको बोतल नै रित्याइदिए । त्यसपछि रेस्टुरेण्ट मालिकले उनीमाथि खुर्सानी चोरेको आरोप समेत लगाएका थिए । पछि उनले आरोपलाई गतल प्रमाणित गर्ने क्रममा रेस्टुरेण्टमा म्यानेजरकै सामून्न अर्को एक बोतल खुर्सानी मगाएर पुरै खाइदिए । उनको यो व्यवहारले सबै छक परेका थिए । उनी भन्छन्, डाक्टरले म अन्य मानिसजस्तै सामान्य रहेको बताएका छन् । मसँग कुनै सुपर पावर छ्रैन् । मलाई खान मनपर्छ र म धेरै खान्छु । सन् २००९ मा खुर्सानी खाने प्रतियोगिता जितेपछि उनलाई हुनान सरकारले खुर्सानीको राजा घोषणा गरेको थियो ।एक पटक रेस्टुरेण्टमा खाना खान जाँदा उनले खुर्सानीको बोतल नै रित्याइदिए । त्यसपछि रेस्टुरेण्ट मालिकले उनीमाथि खुर्सानी चोरेको आरोप समेत लगाएका थिए । पछि उनले आरोपलाई गतल प्रमाणित गर्ने क्रममा रेस्टुरेण्टमा म्यानेजरकै सामून्न अर्को एक बोतल खुर्सानी मगाएर पुरै खाइदिए । उनको यो व्यवहारले सबै छक परेका थिए । उनी भन्छन्, डाक्टरले म अन्य मानिसजस्तै सामान्य रहेको बताएका छन् । मसँग कुनै सुपर पावर छ्रैन् । मलाई खान मनपर्छ र म धेरै खान्छु । सन् २००९ मा खुर्सानी खाने प्रतियोगिता जितेपछि उनलाई हुनान सरकारले खुर्सानीको राजा घोषणा गरेको थियो ।
गालाभरि भ्वांग पारेर विश्वरेकर्ड (फोटाफिचर सहित)
जिउको मासुमा सबैभन्दा धेरै सुरुंग बनाएर विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् एक लक्का जवानले । २२ वर्षका जर्मन युवक जोए मिग्लरले गिनिज बुकमा नाम त लेखाएका छन् तर उनले जे कामका लागि किर्तिमानको प्रमाणपत्र पाए त्यो देख्दा कसैले पनि उनलाई धन्यवाद दिने खालको छैन । किनकी उनल साँच्चीकै डरलाग्दो तथा अनावश्यक र हानिकारक काम गरिरहेका छन् भनेर जो कोहीले पनि भन्छ ।
उनले आफ्ना दुबै गालमा ठूला ठूला दुइवटा गोलाकार प्वाल पारेका छन् । ती प्वालबाट उनले आफ्नो जिब्रोलाई बाहिर निकाल्न सक्छन् । जिब्रो पनि सद्दे कहाँ छ र, टुप्पोमा च्यातिएर दुइहाँगे भएको छ ।
जिब्रोमा मात्र होइन उनले अनुहारका अन्य ११ ठाउँमा पनि प्वाल पारेका छन् । नाकदेखि ओठसम्म पारिएका ती साना ठूला प्वालहरुमा गच्छे अनुसारका ठेटी ठोकिएका छन् ।
उनी १३ वर्षको हुँदादेखि यसरी जिउमा प्वाल पार्न थालेका रहेछन् । अहिले त जिउमा प्वाल पार्नु उनका लागि लत जस्तै बनेको छ ।
आफु आफ्नो जिउका सुरुंगका कारण निकै खुसी रहेको र सधै नयाँ नयाँ प्वाल पार्ने इच्छा रहेको उनी बताउँछन् ।
दुनियाकै कुरुप महिलाको दर्दनाक कथा, कसरी बदलिन् शोकलाई शक्तिमा ?
२६ वर्षको कल्कलाउँदो उमेर हो उनको । तर उनको लागि उमेर र वौशको कुनै अर्थ रहेन । किनकी उनको जिउमा यस्तो रोग छ, जसका कारण उनी विश्वकै सबैभन्दा कुरुप महिलाको उपाधि बोक्न बाध्य छिन् ।
लिजी वेलास्क्वेज अमेरिकाको टेक्सासमा सन् १९८९ मा जन्मिइन् । सामान्य मिति भन्दा ४ हप्ता अघि नै उनको जन्म भएको थियो र जन्मिँदा उनको तौलो जम्मा १२ सय ग्राम थियो । आखिर उनको सरीरमा दुर्लभ वंशाणुजन्य रोग रहेछ, जसका कारण जन्मिसकेपछि पनि उनको सरीरको वृद्धि विकाश खासै भएन ।
उचाइ बढेपनि जिउको मोटाइ भने फिटिक्कै बढेन । उनको जिउको तौल केवल २९ किलो मात्रै छ ।
रोगकै कारण उनको एउटा आाखा अन्धो पनि भयो । सरीरमा बोसो नै जम्मा नहुने त्यो रोगको कारण उनको जिउ निकै कुरुप छ । तर त्यो शोकलाई उनले शक्तिमा बदलेकी छिन् अहिले । अनि विभिन्न खाले दुव्र्यवहारबाट पीडित भएका मानिसहरुका लागि हिम्मत र प्रेरणाको पात्र बनिरहेकी छिन् ।
अशक्त र कुरुप जिउ घिसारिरहेकी लिजीको जिवनमा एउटा दुखलाग्दो घटनाले मोड नै परिवर्तन गरिदियो । उनले एकदिन यु ट्युबमा आफ्नै भिडियो देखिन् । विश्वकै सबैभन्दा कुरुप महिला शिर्षकमा अपलोड गरिएको उनको भिडियो ४० लाख भन्दा बढिले हेरिसकेका थिए, अर्थात् भिडियो सुपरहिट भएको रहेछ अनलाइनमा ।
उनको भिडियो यति धेरै चर्चित भयो, तर भिडियो मुन्तिर मानिसहरुले लेखेका टिप्पणीहरु भने निकै बिझाउने तथा होच्याउने खालका थिए । एकजनाले लेखेको थियो, आफैलाई आगो लगाएर मर । अनि अर्काले लेखेको थियो किन सबैले भनेको मान्दैनौ ? आत्महत्या गर ।
मानिसहरुका कमेण्ट यस्ता थिए की उनी मरे यो दुनिया नै निकै राम्रो बन्नेछ ।
फक्स च्यानलसागको अन्तरवार्तामा लिजीले भनेकी छिन् : हरेक कमेण्टहरु पढ्दा मलाई लाग्यो की मानिसहरु उक्त भिडियो हेर्दै स्क्रिनमा ममाथि मुड्की हानिरहेका छन् ।
त्यसपछि उनले त्यो शोकलाई शक्तिमा बदल्ने प्रण गरिन् । हिम्मत जुटाइन् । उनी भन्छिन् : मानिसहरुले मलाई चिन्नै सकेका छैनन् र म आफुलाई चिनाउन चाहन्छु भन्ने मलाई लाग्न थाल्यो ।
अहिले उनी प्रसिद्ध लेखिका तथा उत्प्रेरक वक्ता बनिसकेकी छिन् । बालबालिकामाथि हुने दुव्र्यवहारको विषयमा उत्प्रेरक भाषण गर्न तथा परामर्श दिनका लागि उनी विश्वका विभिन्न देशमा पुगिसकेकी छिन् । उनले विभिन्न किताबहरु समेत लेखेकी छिन् । सन् २०१० मा पहिलोपटक आफ्नी आमासाग मिलेर एउटा किताब लेखेकी थिइन् उनले । उनका चर्चित तथा प्रेरणादायी किताबहरुमा बि ब्युटिफुल, बि यु, चूजिंग ह्याप्पिनेस आदि रहेका छन् । साथै उनको जिवनकथामा आधारित डकुमेन्ट्री ए ब्रेभ हार्ट : दी लिजी वेलास्क्वेज स्टोरी पनि बनिसकेको छ ।